Momba anay - Qingdao Yingzhicai Packaging Co.Ltd
Manana traikefa mihoatra ny 20 taona izahay amin'nyfamokarana harona plastika
Qingdao Yingzhicai Packaging Co.Ltd, hita ao amin'ny tanànan'i Qingdao, Faritanin'i Shandong, naorina tamin'ny 1996, mandrakotra 9800 metatra toradroa, dia manokana amin'ny famokarana kitapo plastika, kitapo spout, tombo-kase telo, kitapo aluminium, kitapo aluminium, stereo (tena). -manohana) kitapo, kitapo miendrika manokana, mitambatra amin'ny fitsofana sarimihetsika.fanontam-pirinty, famoronana, famokarana kitapo, miaraka amin'ny vokatra be mpampiasa amin'ny indostria toy ny ronono, zava-pisotro, sakafo, condiment, makiazy, fanasan-damba vokatra.
Miaraka amin'ny taratasy fanamarinana fanontana sy fanamarinana fanontana kaody.
Ny orinasa dia manana rafitra fitantanana kalitao feno sy tsara
Nandalo IsO9001-2008 sy QS Food Safety Production Certification
"Ny kalitao dia fiainana, ny tombotsoa azo avy amin'ny fitantanana"
Qingdao Yingzhicai Packaging Co.Ltd dia manantitrantitra ny politikan'ny "Qulity dia fiainana, tombontsoa azo avy amin'ny fitantanana", miaraka amin'ny fahamendrehany, ny heriny ary ny kalitaon'ny vokatra noderain'ny mpanjifa ao amin'ny orinasa.
Misy teknisianina sy mpiasan'ny Qs manana traikefa manankarena, afaka miantoka ny vokatra avo lenta sy mifantina amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny fitaovana, ny fanamarinana, ny fizotrany, ny vokatra vita ary ny fandefasana.
Ny orinasa dia nanangana rafitra serivisy mpanjifa mahomby sy feno, ary manome serivisy mitambatra ao anatin'izany ny fifampidinihana ara-teknika, ny modelin'ny vokatra, ny famolavolana matihanina ary ny torolàlana fonosana.
Ny mpiasa rehetra ao amin'ny orinasa dia vonona ny hiara-hiasa amin'ny mpanjifa an-trano sy any ivelany miaraka amin'ny fihetsika mafana sy tso-po, fomba fiasa matihanina sy tsara kokoa.
Miezaha hamorona serivisy tsara kokoa ho an'ny mpanjifa
Ny antsipiriany dia mamaritra ny fahombiazana na ny tsy fahombiazana
Ny safidy no mahatonga ny ho avy
Firenena sy Faritra fanondranana
1. Nosoratan'i Mr. John Magel Germany, Orinasa efa ela niaraka tamin'i Qingdao Yingzhicai Package.Ny ekipako dia nitsidika ny orinasan'izy ireo nanohy ny baiko.eny, orinasa matihanina izy ireo. Tena mahafinaritra ny miresaka amin'izy ireo. Efa nanao raharaham-barotra imbetsaka izao fa tena faly mandray foana ny entana tsara kalitao sy ny serivisy tsara.
2. Nosoratan'i Mr.Abe Romana USA, Amin'ny maha olom-pirenena amerikana manao raharaham-barotra ao Shina, ny olana voalohany nampanahy ahy dia ny fifandraisana satria ny sakana izay mety hahakivy ny fiatrehana ny ekipan'ny varotra dia ny mifanohitra amin'izany.
3.Ron Matt USA,Tonga androany ny kitapom-paosy sy ny milina, tsara daholo ny rehetra ary mametraka azy ireo amin'ny serivisy, Kitapo paosy dia mijery tsara, ary ny milina dia ao anatin'ny toe-javatra tsara, Mankasitraka ny serivisy matihanina.
4. Nosoratan'i Ms, Julian Paterson Australia, Tena nahafinaritra tokoa ny nitsidika an'i Shina tamin'ny voalohany, tiako ny tanàna, Qingdao, Tena tsara tarehy. Ny fandaharam-potoanako ho an'ity tanàna ity dia ny mitsidika ny mpamatsy Yingzhicai Package.